Solnovel Apk Download Ho an'ny Android [2022 Vaovao Fanavaozana]
Salama daholo, eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona hafa ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Solnovel. Izy io no fampiharana tsara indrindra, izay manolotra tantara an-taoniny maro vakiana maimaim-poana ary manolotra mpanoratra ihany koa izy handefa ny tantarany.
Ny famakiana dia iray amin'ireo fialamboly tsara indrindra saika ananan'ny rehetra, saingy matetika, mieritreritra ny olona fa tsy tiany ny mamaky. Tsy marina izany, ny olona samy hafa dia samy manana ny natiora ananany ary zavatra hafa no tian'izy ireo vakina. Ny hany zavatra tokana dia ny famakiana ireo lohahevitra tiany ihany.
Misy trano famakiam-boky samihafa ao amin'ny Internet, izay manolotra fitambarana tantara an-tsary. Saingy tsy afaka mahita mpanoratra vaovao na fomba fijery vaovao ianao. Noho izany, nitondra sehatra vaovao izahay, izay misokatra ho an'ny rehetra. Afaka miditra amin'ity sehatra ity ny olona rehetra ary mamaky na inona na inona.
Izy io dia iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra, ahafahanao mahita eritreritra, hevitra ary zavatra maro hafa. Ireo rehetra ireo dia tany am-boalohany ary vaovao eny an-tsena. Misy endri-javatra an-taonina ao amin'ity fampiharana ity, izay azonao idirana ary hahazoana valiny mahasoa. Noho izany, tokony ho fantatrao ity app ity, alohan'ny hampiasanao azy. Raha hanao izany dia mijanona miaraka aminay fotsiny ary hizara izany rehetra izany izahay.
Topimaso momba ny Solnovel Apk
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'i LUNKER PTY LTD. Io no sehatra tsara indrindra, izay misy ny tantara farany sy taloha indrindra azo vakiana. Manolotra mpanoratra koa izy io, izay afaka mahazo vola mora amin'ny fampisehoana ny fahaizany manoratra.
Solnovel App dia manome fiasa voaloa, izay ahafahanao mamaky ny sasany amin'ireo tantara foronina tsara indrindra sy be isa indrindra. Misy endri-javatra maro kokoa azonao aleha aorian'ny nahazoana fonosana premium. Manome fonosana maimaimpoana koa izy io, amin'ny alalanao no ahazoanao maka entana maimaim-poana. Amin'ny premium, azonao atao ny mividy ny tantara ary mamaky azy.
Alohan'ny hividiananao azy, ity fampiharana ity dia hanome ny fidirana amin'ny lohahevitra sasany ao aminy, izay azonao vakiana maimaim-poana hitsapana azy. Raha tianao ireo toko ireo dia afaka mividy ilay tantara ianao ary raha tsy tianao dia tsy mila mandoa vola ianao. Io no tolotra tsara indrindra omena ny mpamaky.
Solnovel Apk dia manolotra ihany koa hahazoana tetika ho an'ireo mpampiasa. Ny fomba voalohany dia ny fanoratanao izay navoaka tamin'ny app ity, hanome anao vola tena izy araka ny hevitry ny mpamaky. Ny safidy faharoa dia amin'ny alàlan'ny fanasana, azonao atao ny manasa olona samihafa hanatevin-daharana ity vondrom-piarahamonina ity ary ho setrin'izany, hahazo vola madinika ianao.
Ny vola madinika no hevi-dehibe, izay azonao angonina amin'ny fanasana na fidirana ifotony isan'andro. Azonao atao ny mamadika ireto farantsa ireto ho lasa tena vola ary esorina koa. Ny tahan'ny isa 199 dia mitovy amin'ny $ 1.99, izay ara-drariny satria afaka manangona vola madinika marobe amin'ity rindrambaiko ity ianao.
Betsaka ny zavatra azonao fantarina, amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity. Noho izany, alaivo ity Mahazo App ary manomboka mampiasa ity fampiharana ity. Raha manana olana amin'ny fampiasana ity app ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Anaran'ny fonosana com.sol.novel
Developer LUNKER PTY LTD
SOKAJY Apps/Boky & Reference
Misy endri-javatra maro kokoa taonina, izay azonao atao amin'ny fampiharana ity. Notanisainay tao amin'ny fizarana etsy ambony ny sasany amin'izy ireo, saingy misy zavatra hafa tianay hizara aminareo rehetra. Ao amin'ny lisitra eto ambany no hizarantsika ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe an'ity fampiharana ity.
Volavolan-taonina, Ampitomboy ny fotony isan'andro
Fomba mora ahazoana vola
Fomba tsara indrindra handaniana fotoana
Misintona haingana misy
Ny fisie Apk dia misy ao amin'ny Google Play Store sy ity pejy ity. Raha te hampidina azy avy eto ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny. Eo an-tampon'ny sy ambany amin'ity pejy ity no misy azy, kitiho eo izy ary miandry segondra vitsy. Hanomboka ho azy ny fisintomana.
Solnovel App no ​​fampiharana Android tsara indrindra ho an'ny mpamaky sy ny mpanoratra. Ny mpamaky dia mahita ny tantara foronina tsara indrindra vakiana ary ny mpanoratra afaka mahazo vola amin'ny fanoratana. Noho izany, ampidino ity rindranasa ity ary manomboka mamaky na mahazo vola. Aza adino ny miverina amin'ny tranonkala indray.
Sokajy Apps, Boky & Reference Tags Mahazo App, Solnovel, Solnovel Apk, App Solnovel Post Fikarohana
SportyBet Apk Download ho an'ny Android [Fanavaozana 2022]
Xplayer Pro Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]